Ciise Kowaad, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Noloshan waxaan ku wadnaa halista ah in lagu silcino Masiixa. Waxaan ka tagnaa khasnadaha iyo farxadda ku meel gaarka ah ee dunidan. Haddii noloshan oo dhami aynaan wada haysanin, maxaan wax u siin karnaa? Haddii aan wax walba ka bixinno hal fariin oo xitaa aan run aheyn, waa inaan si kaftan ah u quudhsanaa.
Injiilku wuxuu noo sheegayaa inaan rajo ku qabno nolosha mustaqbalka ee Masiixa maxaa yeelay waxay kuxirantahay sarakicidda Ciise. Easter waa xusuusin in Ciise ku soo noolaaday - oo wuxuu noo ballanqaaday in aan mar kale soo noolaan doonno. Haddii uusan sara kicin lahayn, rajo kuma lihin noloshan iyo mustaqbalkaba. Si kastaba ha noqotee, Ciise runti wuu sara kacay, sidaa darteed waxaan leenahay rajo.
Bawlos wuxuu xoojinayaa warka wanaagsan: “Masiixa ayaa kuwii dhintay laga sara kiciyey! Isagu waa kii ugu horreeyay ee Eebbe sara kiciyey. Sarakiciddiisuna waxay ina siineysaa dammaanad ah in xitaa kuwii rumaysadka ku dhintay Ciise la soo sara kici doono ”(1 Korintos 15,20 GNÜ).
Israa’iil qadiimiga, hadhuudhkii ugu horreeyay ee la goosan jiray sanad walba si taxaddar leh ayaa loo jaray oo loo caabudi jiray Ilaah. Kaliya markaa hadhuudhka intiisa kale ayaa la cuni karaa (Laawiyiintii 3, 23-10 LUT). Markay Ilaah u bixiyeen go'gii ugu horreeyay ee Ciise calaamadda u muujiyo, waxay garteen in hadhuudhkooda oo dhami ay hadiyad ka yihiin Ilaah. Dhibanaha koowaad wuxuu matalaa goynta oo dhan.
Bawlos wuxuu ugu yeedhay Ciise midhihii ugu horreeyay isla mar ahaantaasna wuxuu leeyahay in Ciise yahay ballantii Ilaah ee goosashada aad u ballaaran ee wali soo socota. Isagu waa kii ugu horreeyay ee la sarakiciyo, oo sidaasuu u metelayaa kuwa la sara kiciyey. Mustaqbalkeenu wuxuu ku xiran yahay sarakiciddiisa. Waxaan ku raacnaa oo kaliya ma ahan dhibaatooyinkiisa, laakiin sidoo kale sharaftiisa (Rooma 8,17:XNUMX).
Bawlos uma aragno shaqsiyaad go'doonsan - wuxuu noo arkaa inaan ka tirsan nahay koox. Kooxdee? Ma waxaan noqon doonnaa dad raacaya Aadan mise kuwa raaca Ciise?
“Geeridu waxay ka timid qof,” ayuu yidhi Paul. Sidaas oo kale, "sarakicidda kuwii dhintay sidoo kale waxay ku timaadaa qof bini aadam ah, maxaa yeelay sida qof walbaa Aadan ugu dhinto, sidaas oo kale dhammaantood way ku wada noolaan doonaan Masiixa" (1 Korintos 15,21: 22-XNUMX LUT). Aadan wuxuu ahaa midhihii ugu horreeyey ee dhimashada; Ciise wuxuu ahaa midhihii u horeeyey sarakicidda. Markii aan ku jirno Aadan, geeridiisa ayaan la wadaagnaa. Markaynu Masiixa ku jirno, waxaynu la wadaagnaa sarakiciddiisa iyo nolosha weligeed ah.
Injiilku wuxuu rumeeysan yahay dhamaan Masiixiyiinta Masiixa inay nolosha soo socdaan. Kani maahan faa'iido ku meel gaadh ah noloshaan - weligeed waan ku raaxeysan doonnaa. "Qof walba isagaa iska leh: Masiixu waa kan ugu horreeya, ka dib, markuu yimaado, kuwa isaga ka mid ah" (1 Korintos 15,23:XNUMX LUT). Sidii Ciise xabaasha uga soo kacay, waxaynu u kici doonnaa nolol cusub oo cajiib ah. Waan faraxsanahay! Masiixu wuu sara kacay, innaguna isagaynu la jirnay.